وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِِّنْكُمْ فَإنَّهُ مِنْهُمْ / الآية
Marka ugu horaysa haddii la waydiiyo kuwaa wadanka gaalada soo geliyay. Maxaad wadanka gaalada kala soo doonteen oo aad dadka muslimiinta ahna aad ugu baabi�seen? Jawaabtoodu waa wadanka ayaan amnigiisa ku sugaynay gaaladaa IWM oo been iyo waxba kama jiraan ah.
Sidaad u lahaydeen waa afar wadaad ee hala soo qab-qabto ayaa waxaa idinku dhacay wax aydaan fillayn. Siduu shaacirku yiri:
Mu�miniineey haka yeelanina Yuhuudda iyo Nasaarada sokeeye ( Aad jeceshihiin ) ( Maxaa yeelay ) qaarkood qaarka kale buu xigaa, qofka ka yeesha sokeeye oo idinka idiinka mid ahna iyaguu ka mid yahay, Allana ma hanuuniyo dad daalimiin ah ( oo gaaloobay )
Sh. C/Casiis Ibnu-Baaz RC wuxuu aayadan kala soo dhex baxay fatwo aad cabiri karto fiqiga Alle SW uu ku manaystay Sheekhaa RC wuxuuna yiri:
Waana fatwadii uu cuskaday Sh. Albaani RC kolkii Wax laga waydiiyay dagaalkii khaliijka ee ciraaq lagu duulayay 1990kii wuxuuna yiri fatwadan toosan ee sh Ibnu-Baaz RC waxaa laga qaadanayaa laba arin midood. Wuxuuna yiri sheekhu RC:
Waxaa sidoo kale horay u daliishaday Al-Imaam Ibnu-Xazam RC aayadaa inay ijmaac tahay qofka gaalo taageera oo muslimkana ka hiiliya. Wuxuuna yiri Sheekhu RC:
Sh Axmad M Shaakir RC baa sidoo kale fatwo ku dhisay isla aayadaasi:
Risaaladaa uu ku caddaynayay dadka lasocday ingiriiska iyo faransiiska oo xilligaa masar iyo buldaan kale oo muslimiin leedahayba duulaan ku ahaa inay diinta ka baxeen. Wuxuuna Sheekhu RC baabkaasi uu cinwaan ugaga dhigay:
والإسلامية عامة / 149 العربية
Kadibna Sheekhu RC wuxuu yiri:
In la kaalmaysto Ingiriiska nooc walba oo kaalmaysi ah, ha yaraado ama ha badnaado waa diin kabax aad u daran, iyo gaalnimo cad, aanan aqbalaynin cudurdaar, aanan anfacaynin tafsiir ( khalad ah oo aad adigu ka fahantay ) kumana badbaadayo qofka ay ku xambaartay qabyaalad doqonnima ah, iyo siyaasad indha la�aan ah, mujaamalo ( isjeclaysiin aan waxba ka jirin ) oo munaafaqad ah, waana isaga mid arinkaa qof-qof ama dawlado, ama madax ( noocuu doonno ha ahaado, sida madaxda qabaailka ama xukuumadda ) dhammaantood gaalnimada iyo diin kabixiduba way u siman yihiin, oo aan ka ahayn qofka jaahilka ka ah ee khaladamay kadibna isdaba qabtay ee tawbad keenay kadibna qaaday jidkii mu�miniinta kuwaasu waxaa suurowda in Alle uu ka tawbad aqbalo haddii ay Alle u khaalis yeelaan quluubtooda oo aysan ka ahayn mid siyaasad ku dhisan ama dad ku raali garayn. Wuxuu intaa sii raaciyay:
Waliba Sheekhu RC wuxuu aad uga waaniyay muslimiinta rag iyo dumarba inay ogaadaan kuwaa gaalada soo raacay ay xaasaskii kala furmeen oo halkaasi nikaaxoodii uu ku buray wax ka dhaxeeyaana ma jiraan haday ahaan lahayd nasab iyo dhaxal midna kama dhexeeyaan. Qofkase tawbad keena oo iyaga kamid ah isla markaana cadawga la dagaalama ummadana u gargaara wali isuma ahaanayaan reer is qaba ilaa la sameeyo nikaax cusub. Iyo waliba inay iska hubiyaan inta aanay guursan inuu kamid yahay qoladaa la tuuray ee ridoday. Wuxuu kaloo sheegay Sheekhu RC haddii qof dumar ah ay ku raali noqoto sidaana xaas ugu ahaato iyaduna way raaci oo diinta way ka bixi. Alle baan nabad waydiisanaynaa. Fatwadaa iyada oo dhammaystiran waxaan kusoo guurin doonaa haddii Alle idmo isla kitaabkan gudihiisa. Inta yare ee aan idiin soo koobayna waa tan hoosta ku qoran. Qofka dheeraad rabaana websaydyada soomaalida baan u diray hadda ka hor qofkii rabaana xagaa haka raadsado maqaalka aan ku magacaabay:
Way Gaaloobeene Kala Guura.
Sayidka RC oo isticmaarka ku jihaaday wixii raacay isticmaarka ee daba dhilif u ahaana intuu moorada islaamka ka saaray buu ku yiri: Gaalo baad tihiin lana jihaaday, soomaali aad bay u qadirisaa ilaa maantana wanaagiisa waa la xusaa intaa iyo in ka badana wuu inaga mudan yahay sayidka RC waliba soomaalidu taalo bay u dhiseen, waxaase layaab leh raga hadda cadawga wadanka soo galay ka dhiidhiyay ee halganka kula jira maxay Soomaali u qadarin la�dahay?. Haddaad ku andacoon lahaydeen nimankan dadka bay gaalaysiiyaan, haddii uu arinku sidaa yahay sow tuu sayidkuba RC uu gaalaysiiyay nimanka gaalada la saftay. Waxaan shaki lahayn Sayidka RC iyo raga hadda halganka kula jiraba iskama aysan gaalaysiine xujo iyo baraahiin cad-cad bay u haystaan arintaa, waxaadna ogaataa islaanimadu ma�aha xabag kugu dhegan oo aan kaa fuqayn ee waa inaad ogaataa in sida ay waysada u jabto oo kale inay islaamnimadana u jabi karto haddii aad la timaado wax buriya islaamnimadaada.
Waxaan shaki lahayn in Soomaalidii hore ay ahaayeen dad aan runta ka war wareegin soomaalida waqooyi iyagu wayba kasii xag jireen xaga saraaxada waxaana taa kuu caddaynaya, mar ay diinta ka baxday haweenay da� ah oo u dhalatay goboladaa waqooyi xilligii iticmaarka, ayaa kolkii ay dadku maqleen inay haweynaydaasi gaalowday halkii ay ka baroordiiqi lahaayeen bay waxay yiraahdeen: Alla maxay islaamka foolxumo kala dhex baxday! Haddana isaga oo qofku uu la taagan yahay gaalnimo cad ayaa maro islaam oo been ah la huwinayaa. Waana arinta uu la yaabay saxaabigii jaliilka ahaa Xudayfa Ibnul-Yamaan RC kolkuu la yaabay dad gaalnimo ku dhaqmaya muslimnimana loo wato ayaa wuxuu yiri:
Kadibna Alle SW wuxuu inoo caddeeyay in gaalada ay waliga ka dhigteen ay daliil u tahay inaysan mu�miniin ahayn. Wuxuuna Alle SW uu yiri:
فدل على أن الإيمان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء ويضاده ، ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب---إلخ / كتاب الإيمان / 13
Aayadan waxay tusinaysaa in iimaanka la sheegay uu anfinayo ( uu Diidayo ) ka yeelashada ay gaalaga gacal ka yeesheen wuuna ka hor imanayaa ( IImaanka ), kumana kulmaan iimaan iyo in gacal laga yeesho ( gaalo ) hal qalbi dhexdii
Mu�miniineey haddii aad adeecdaan (Aad yeeshaan oo aad aqbashaan baadilkooda) koox ka mid ah Yuhuud iyo nasaaro waxay idiin celin doonaan iimaankiinna dabadii gaalnimo.
لا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ / سورة ص / 59
Markii ay gaaladu kusoo duushay muslimiinta iyaga oo kaashanaya kuwo muslim ku sheeg ahna culimadu waxay qaateen mawaaqif cad-cad oo ka tarjumaysa dhiiranaantooda xaqqa iyaga oo dhaqan gelinaya adillada kusoo aroortay ee aan kor kusoo xusnay iyo kuwo kale oo fara badanba ee mamnuucaysa gaala daba orodka iyo kusoo hogaaminta wadamada muslimiinta, umaddana u caddeeyay in gaala u hiilintu ay tahay diin kabax.
Culimadii xilkoodii waa ay guteen Imaamyada iyo ducaadda masaajidda haysataa maxaa helay. Masaajidadii iyo kutubtiiba way inoo dhan yihiine maxaa looga hadli la�yahay arintan iska cad ee qof walbaaba uu fahmi karo qatarteeda?.
Wadaadadu waqtiga ay u hayaan inay kaga waramaan suufiya iyo wixii lamid ah, kuwa soo geliya wadamada islaamka gaaladana laga warwareego maxaa daliil ah oo aad u haysaan?
Shaki maleh inaad ku sifowdeen ninkii la oran jiray Abul-Calaa Al-Macari. Wuxuu noolaa xilligii cabaasiyiinta ayaa wuxuu aaminsana waxyaabo hadda waxa loo yaqaano faylisoofnimada. Waxyaabihii uu aaminsanaana waxaa kamid ahaa, in aan xoolaha la qalin maxaa yeelay adiguba ma ogolid in lagu qasho, waxaa kaloo kamid ahaa in digaaga aan ukunta laga cunin maxaa yeelay waxay u dhashay ukuntaa inay ilmo ka hesho. Sidoo kale in loo daayo xoolaha caanahooda, maxaa yeelay waxay ugu tala gashay in dhasheedu u cabto, wuxuu kaloo oran jiray, haddii aakharo la tago ilaahay waxba I waydiin maayo maxaa yeelay anigu ma guursan sidaa darteed waxa caalamka ka dhacaya ee dagaalo iyo dhiig daatayba waxa la waydiin doonaa inta guursatay ee wax dhashay. Kadib wuu xanuunsaday waxaana lagu yiri: waa inaad digaag cuntaa haddii kale waad dhimanaysaa, waxa sidaa ku lehna waa dhaqtarkii dawaynayay. Kolkaa buu diiday. Kadib baa lagu celceliyay inuu cuno digaagaddaa, kadib wuu ogolaaday oo wuxuu yiri ii keena, markii loo keenay buu wuxuu billaabay in uu lahadalo digaagaddii oo shiilan oo hortiisa taala. Wuxuuna ku yiri digaagaddii:
Wadaadada waxaa u sahlan inay maanta oo dhan suufi la cayrsado kuwa ka daran ee gaalada wadanka soo geliyayna laga warwareego. Su�aashaasi jawaabteeda idinka ayaan idiin daayay maxaa yeelay anigu waan ku wareeray.
Faafin: SomaliTalk.com | Oct 29, 2008